Ahoana ny fikirakira ny Mac hanambarana ny ora | Avy amin'ny mac aho
Raha taona vitsivitsy ianao dia azo antoka fa hahatadidy ianao ary nanana famantaranandro avy amin'ny orinasa Japoney Casio. Ireo rejon ireo dia nahafahanay nanamboatra azy io ka isaky ny tonga ara-potoana izahay mamoaka fampitandremana tsara, hampahafantatra anay. Io feo io no tena irina indrindra rehefa tao an-dakilasy izahay, satria nanondro fa efa hifarana izy io.
Rehefa nihalehibe isika, ny zavatra azo inoana indrindra dia ny nanovantsika ny tsirontsika ary nihazona famataran-tanana ary nariantsika avy eo tariho izahay raha tsy amin'ny fotoana nitarihan'ny telefaona anay finday, ka azo antoka fa tapitra ireo bipandy nilaza tamintsika ny fotoana.Saingy tsy izany. Satria ao anatin'ny safidy fikirakirana samihafa an'ny OS X, azontsika atao ny manamboatra ny famantaranandro izay aseho eo amin'ny bira fisakafoana ambony hamaky mafy amintsika ny fotoana isaky ny eo amin'ny teboka. Saingy tsy eo amin'ny teboka ihany, fa afaka mampandre antsika isaky ny antsasak'adiny na isaky ny telovolana iray ora, amin'ity fomba ity raha variana manao zavatra isika ary tsy maintsy mandeha, dia hamaky ny fotoana ny Mac rehefa nanamboatra azy isika.
Amboary ny fampandrenesana ny ora fanairana ao amin'ny OS X
Miakatra aloha isika Taratasy rafitra.
Ao anatin'ny System Preferences, mankany isika Daty sy ora.
Amin'ny daty sy ora, mankany isika Lazao ny fotoana.
Tsindrio ny menio mitete-midina ary safidio ny safidy izay mampatahotra antsika indrindra:Ora iray, antsasak'adiny na telovolana.
Fa koa azontsika atao ny manamboatra ny feo ampiasaina hanambarana ny ora. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny feo Customize, azontsika atao ny misafidy ny feon'ny rafitra na ny azy manokana, manova ny hafainganana izay ampahafantarina antsika ny ora, ary koa manitsy ny haben'ny fampandrenesana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fananganana Mac anao hanambarana ny ora
Torohevitra hanadiovana tsara ny Mac sy ny fitaovana Apple hafa